Izintela ezingaqondile: ziyini futhi zikhona eSpain | Ezezimali Zomnotho
Nsuku zonke, izintela ziyingxenye yenkambiso yethu yansuku zonke, noma ngabe awukuqapheli. Kodwa-ke, sikhokha intela, kokubili intela eqondile nengaqondile. Isibonelo, uma uthenga okuthile esitolo, noma lapho uthenga imoto esetshenzisiwe, noma ikhaya komunye umuntu. Yebo, yizinto zansuku zonke esingazenza impilo yonke nokuthi kungenzeka ungazi ukuthi ukhokha intela engaqondile ngayo.
Kodwa, Yini intela engaqondile? Ngoba zikhona? Futhi, ngaphezu kwakho konke, yiziphi ezikhona? Konke lokhu nokunye okuningi yilokho esizokutshela khona ngokulandelayo.
1 Yini intela engaqondile
2 Kungani kukhona intela engaqondile
3 Intela engaqondile ikhokhwe eSpain
3.1 Intela Eyengeziwe (VAT)
3.2 Intela yokudlulisa nentela yesitembu
3.3 Imali engenayo yamasiko
3.4 Izintela ezikhethekile
3.5 Intela yendawo
Yini intela engaqondile
Izintela zingahlukaniswa ngamaqembu amabili amakhulu, aqondile futhi angaqondile. Lezi zokugcina zicatshangwa njenge lezo ezikhokha ngokungaqondile umthamo wezomnotho. Ngamanye amagama, izintela ezingaqondile yilezo ezikhokhelwa ukusetshenziswa, ithrafikhi noma umkhiqizo owenzekayo. Kulokhu, kuzoncika kumkhiqizo uqobo, hhayi kubantu, yingakho engaqondile, ngoba kungenxa yokusetshenziswa kwalowo mkhiqizo okufanele ukhokhwe.
Isibonelo, ake ucabange ukuthi uya enkampanini yezokuvakasha bese unquma ukuqasha iphasela lokuya e-United States. Lo mkhiqizo "ukhokhiswa intela" ngentela engaqondile, oyikhokha ngalokho okubizwa nge-VAT. Yebo, leyo ngenye yezintela ezaziwa kakhulu, kepha iqiniso ukuthi kukhona ezinye ongase ungazazi.
Kungani kukhona intela engaqondile
Umbuzo omkhulu ongazibuza wona manje yisizathu sokuthi kungani umuntu, osevele ekhokhela umkhiqizo othile, futhi kufanele akhokhe intela engaqondile. Eqinisweni, kuyinto abantu abaningi abangayicabanga njengoba sikhuluma ngemali ekhokhwayo ngaphandle kokuthi umuntu oyithengisayo akwazi ukuyithokozela.
Zonke izintela ezingaqondile bayingxenye yoxhaso lukahulumeni, futhi bakhonza ukuqoqa imali. I-Tax Agency uqobo lwayo ibiphethe ukuthethelela ukuqoqwa kwale mali ngale ndlela elandelayo: kuyintela okufanele iqoqwe ngoba ukusetshenziswa kwalezo zimpahla ezitholwayo kudala izindleko zomphakathi okufanele zithwale. Kulokhu, ezinye zalezi zindleko ziyabonakala kakhulu, njengogwayi noma utshwala. Kepha kwabanye kunzima ukuyiqonda.
Intela engaqondile ikhokhwe eSpain
Kodwa-ke, njengezintela ezingaqondile asinayo i-VAT kuphela. Eqinisweni, kunezintela eziningi ozikhokhayo kunalokho okwenzayo ngaphandle kokuqaphela. Ngakho-ke, senze ukuhlanganiswa kwalokho abayikho futhi sizochaza imininingwane ethe xaxa ngalowo nalowo wabo.
Intela eyengezwe ngevelu, eyaziwa kangcono njenge-VAT, ukuthi wonke umuntu uyazi futhi wazi kancane ukuthi kufanele ayikhokhe. Isibonelo, uma uthenga okuthile, noma uma ucela usizo lomsebenzi, i-VAT iya ngentengo okufanele ikhokhwe (ngaphandle kwalapho kushiwo ngenye indlela).
ESpain Sinezinhlobo ezintathu ze-VAT, eyodwa encishiswe kakhulu engu-4%, eyehlisiwe ngo-10% nojwayelekile, okungama-21%.
Intela yayo iwela njalo kumthengi wokugcina, okungukuthi, lowo ozojabulela insizakalo noma umkhiqizo. Kodwa-ke, kulele kulabo abenza umsebenzi, noma abathengisa lowo mkhiqizo, ukuqoqa le ntela bese beyikhokha kuMgcinimafa. Ngabe usho ukuthi yonke iVAT yenzelwe uMgcinimafa? Cha, i-VAT edingwa yibhizinisi ukwenza umsebenzi wayo ingadonswa.
Ngamanye amagama, njengoba abathengi bekhokha i-VAT, nezinkampani ziyayenza, ukuze kuthi ngemuva kwalokho i-VAT ekhokhiswa yilowo okhokhelwayo idonswe, kungene umehluko.
Intela yokudlulisa nentela yesitembu
Enye yezinto ezaziwa kakhulu ngaphakathi kwentela engaqondile yilezo zokudluliswa kwempahla nezenzo zomthetho ezigciniwe.
Lokho okwenzayo intela ukusakazwa kwempahla namalungelo, kanye nezindleko noma imali engenayo esinayo. Isibonelo, ake sithi unendlu, noma imoto, futhi ufuna ukuyidayisa. Yebo, kulezi zimo, i-VAT ayikhokhwa, kepha le ntela iyakhokhwa, okucishe kufane.
Njengamanje, yimiphakathi ezizimele uqobo ephethe ukulawula le ntela, ngakho-ke kuya ngokuthi uhlala kuphi ungakhokha ngaphezulu noma ngaphansi kwayo.
Kodwa-ke, ayisebenzi nje kuphela uma kukhona ukuhanjiswa, okungukuthi, ukuthengiswa kwezimpahla, amalungelo ... kepha futhi kungasetshenziswa ekusebenzeni kwenkampani ngisho nasezenzweni okufanele zibhalwe ngokusemthethweni, imibhalo yama-notary, njll. Futhi njenge-VAT, umuntu okufanele akhokhe intela nguyena oyitholayo, hhayi umthengisi.
Imali engenayo yamasiko
Le ntela ilawulwa yi-Regulation (EU) 952/2013 yePhalamende laseYurophu kanye noMkhandlu, ka-Okthoba 9, 2013, evuma i-Union Customs Code.
Yini igravel? Yebo, okuthengiswayo, kokubili okungenisiwe nokuthekeliswa kusuka eSpain. Isibonelo, cabanga ukuthi uthengisa okuthile kwelinye izwe, ngoba kufanele ukhokhe intela (lokhu) ngokwenza lokho kuthengisa (ngaphezu kwazo zonke izintela okufanele uzikhokhe ngaphezu kwalokhu).
Izintela zentela, ngohlobo lwazo, zikhokhwa kuphela ngabantu abathenga izimpahla ezithile ezithile. Vele, kufanele kubhekwe ukuthi bangakhokhiswa izintela ezimbili, i-VAT kanye nentela ekhethekile.
Yimiphi imikhiqizo esikhuluma ngayo? Yebo, sibhekisa ngqo, ukukunikeza izibonelo, ugwayi, utshwala noma iziphuzo ezidakayo ngokujwayelekile, ama-hydrocarbon noma ukubhaliswa kwezinto zokuhamba.
Okokugcina, sinentela yendawo. Yilezo uMkhandlu Wedolobha noma iMikhandlu Yesifundazwe engazifuna kubantu. Futhi lapha intela yesifunda izofakwa.
Isibonelo sabo? Impela ubazi kahle kakhulu: intela ezimotweni zokudonsa imoto, eyaziwa kangcono njengentela yomgwaqo (yebo, ngokuba nemoto, isithuthuthu, ikharavani ... nokuhamba uzungeze iSpain bakwenzela ukuthi uyikhokhele); noma intela yezindlu, eyaziwa kangcono njenge-IBI (oyikhokhela ngoba unekhaya).
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Izintela » Izintela ezingaqondile